Site Maintenance (M&E) Supervisor | Job in Myanmar ﻿
9.6.2020, Full time , Construction / Building
•	Construction Site များ၏ Temporary M&E facilities များကို တပ်ဆင်၊ ထိန်းသိမ်း၊ စစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်း
•	Electrical & Mechanical ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများအားလုံးကို Preventive Maintenance ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည်များအား စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
•	Project တွင်သွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံ ၊ အရည်အချင်းနှင့် ကြိုးစားအားထုတ်ပေါ်မူတည်၍လစာညှိနှိုင်းပေးမည်။
•	အသက် (၂၅) နှစ် နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။
•	Electrical Installation နှင့် Plumbing and Sanitary Installation လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၂)နှစ်ရှိရမည်။
Work location ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း ၊ မရမ်းကုန်း။
•	Site ၏ Document Control Focal Person အဖြစ် မိမိထံပေးပို့လာသော Drawings / Reports / Records / Instruction / Information တို့ကို လိုအပ်သလို ထိန်းသိမ်းရန်၊ ဖြန့်ဝေအကြောင်းကြားရန် •	Site ၏ Report များဖြစ်သော Daily Report / Weekly report / Manpower report / Schedule report / SHE report / QAC report တို့ကို Project Engineer ၏ ညွှန်ကြားခ ...
•	စာရင်း၊ ဇယားများအား တိကျမှန်ကန်စွာ ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးနိုင်ရမည်။ •	Stationary, IT, Assets ပစ္စည်းများနှင့် အခြားလိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများအားဝယ်ယူ မှတ်သားစာရင်းပြုစုနိုင်ရမည်။ •	ကားလမ်းကြောင်းများ စီစဉ်ပေးနိုင်ရမည� ...
Procurement Executive (HEM/MCT)
•	Machine Tools နှင့်ပတ်သက်ပြီးနားလည်တတ်ကျွမ်းရမည်။ •	Computer, Email, Excel ကျွမ်းကျင်ရမည်။ •	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ၊ ရိုးသားကြိုးစားသူ၊ စာရင်းများကိုတိကျစွာ စစ်ဆေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Site Inspection သွားနိုင်ရမည်။ •	� ...
Senior M&E Engineer (Electrical - Tender)
• Prepare design, proposal, various budgetary and detail estimates for submission to clients • Ensure correct drawings, bills of quantities, standard and specifications are submitted for various RFQ in time • Ensure the project information and all bidding documents are well-organized and kept in control • Support Procurement team during purchase to meet specifications, help to define suppliers’ availability within time and budget constraint • Sourcing subcontractor with required qualification and making interviews/assessments ...
•	အသက် (၂၅) နှစ် နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။ •	သွက်လက်တက်ကြွပြီး ၀န်ထမ်းအားလုံးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ရှိပါက Site သို့ သွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
340 Days, Full time , Construction / Building
•	ရိုးသားကြိုးစားသူ လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	ဌာနဆိုင်ရာရုံးများအား ၀င်/ထွက်သွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရန်ကုန်မြို့တွင်း ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	(၈) မိုင် ရုံးချုပ်တွင်တာ� ...
•	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	စီမံခန့်ခွဲမှုပြုလုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုလုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	သန်လျင်သီလ၀ါ Site တွင်နေထိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
SENIOR CIVIL ENGINEER (RSE-CONSTRUCTION)
• Plan & execute required site inspections in collaboration with operation team • Responsible for safe and proper execution of works as per regulations • Daily progress reporting to customer • Daily documents preparation, signing and submission for the executed works
•	Store ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရမည်။ •	ပစ္စည်းအ၀င်အထွက်စာရင်း၊ ဇယားများအား တိကျမှန်ကန်စွာပြုစုထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။ •	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	သန်လျင်သီလ၀ါ Site တွင်နေထိုင်နိုင်� ...
•	လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံ ၊ အရည်အချင်းနှင့် ကြိုးစားအားထုတ်ပေါ်မူတည်၍လစာညှိနှိုင်းပေးမည်။ •	လုပ်ငန်းခွင်တွင် အာရုံစိုက်ကြီးကြပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	သန်လျင် သီလ၀ါ Site တွင်လုပ်ကိုင်နိုင်သြူ� ...
•	လုပ်ငန်းခွင် တစ်ခုလုံးကို တာဝန်ယူကြီးကြပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	သန်လျင် သီလ၀ါ Site တွင်နေထိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	စာရင်းဇယားများအား တိကျမှန်ကန်စွာ စစ်ဆေးစာရင်းသွင်း ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။ •	WT/CT/Tax နှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Daily,Weekly,Monthly Report များ ပြင်ဆင်နိုင်ရမည်။ •	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်း� ...
o	မိမိတာဝန်ယူရမည့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေသူအားလုံးကို ချမှတ်ထားသည့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ညွှန်ကြားချက်၊ စည်းမျည်းစည်းကမ်းများကို လက်တွေ့ လိုက်နာ လုပ်ဆောင်စေရန် ပညာပေးခြင်း၊ စ� ...
•	To get contacts of new Potential Clients, do necessary introduction and get physical meeting appointments. •	Write report the status of networking with Potential Clients and explain at Departmental Meetings •	To attend meetings with Potential Clients and explain about the services of the Company and, if required, by power point presentation. •	To follow up sources of tender invitations in order to receive tender invitations from Potential Clients and Existing Clients in time. •	To keep positive and healthy relationships with Exi ...
•	Computer, Email, Excel ကျွမ်းကျင်ရမည်။ •	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ၊ ရိုးသားကြိုးစားသူ၊ စာရင်းများကိုတိကျစွာ စစ်ဆေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Site Inspection သွားနိုင်ရမည်။ •	(၈) မိုင် ရုံးချုပ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
•	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ အနည်းဆုံး(၃)နှစ်ရှိရမည်။ •	အရက်သေစာမသောက်စားတတ်သူ၊ စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	Site ထဲတွင်နေထိုင်နိုင်သူဦးစားပေးမည်။
•	To perform regular site inspection as per set schedule and check the works executed are in accordance with approved specifications, standards and MOS. •	To perform regular QA/QC Audits as per schedule •	To report the abnormal findings and follow up the corrective and preventive actions •	To ensure the tools and equipment are regularly calibrated before their expiration date and support site team with calibration work if necessary •	To ensure the tools and equipment used are verified and support site team with verification work i ...
342 Days, Full time , Construction / Building
• လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ ညှိနှိုင်းပေးမည် • ကုမ္ပဏီ၏ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် Maintenance လုပ်ငန်းများကို Maintenance Team အားဦးစီး၍ စီမံခန့်ခွဲ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန် • ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်အ ...
•	Make Technical and Commercial research and identify potential customers, customer needs and decision making structure and contacting them via email or phone to establish rapport and set up meetings •	Make Technical and Commercial research to identify the market trend for new business opportunities •	Develop short-term and long term business development strategies to improve company capabilities in identifying and winning new business opportunities •	Take the lead in identifying client needs, specification, proposal su ...
•	Documentation ပိုင်း ကျွမ်းကျင်ပါက ဦးစားပေးစဉ်းစားမည်။ •	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ၊ ရိုးသားကြိုးစားသူ၊ ဦးဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	Site Inspection သွားနိုင်ရမည်။ •	သီလ၀ါ Site တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
•	Pile Foundation, Topographic, Leveling နှင့် Construction ပိုင်းတွင် ကျွမ်းကျင်ရမည်။ •	မြေတိုင်းလုပ်ငန်းသုံး CAD Drawing Software တစ်မျိုးမျိုးကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ် အသုံးပြု၍ ပုံစံထုတ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါက ဦးစားပေးမည်။ •	သန်မာဖျတ်လတ� ...
•	Project တစ်ခုလုံး၏ Material / Labour / Sub-Contractor တို့၏ Cost Control တာဝန်ကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ (တွက်ချက်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ Approval လက်မှတ်များရယူခြင်း၊ Record ဖိုင်တွဲခြင်း၊ Head Office / PM တို့ဖြင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း အစရှိသည့် တာ� ...
Site Maintenance (M&E) Supervisor Maintenance Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYann Pro Paragon Construction Co., Ltd Maintenance Jobs Maintenance Jobs Construction/Building Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Shwe Ngwe Kabar Kyaw Construction Services & Edu